गाई र भैँसीको घ्यूमा कुन बढी लाभदायक? – Health Post Nepal
गाई र भैँसीको घ्यूमा कुन बढी लाभदायक?
२०७८ फागुन १४ गते ११:१८
काठमाडौं – घ्यूउले खानेकुरामा स्वाद मात्र बढाउँदैन यसमा पौष्टिक तत्व पनि प्रशस्त हुन्छ। दाल, रोटी वा पराठा जे होस् घ्यूले हरेक परिकारमा विशेष स्वाद थप्छ। धेरैले तौल बढ्छ भन्ने घ्यू खानबाट टाढै रहन्छन्। जबकि घ्यु स्वास्थ्यका लागि शक्तिको निकै लाभदायक स्रोत हो।
घ्यु प्रोटिन, स्वस्थ बोसो, भिटामिन ‘ए’, ‘ई’ र ‘के’ को एक समृद्ध स्रोत हो। घ्यू तपाईंको छाला, कपालको लागि पनि राम्रो हो। यसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ र मुटुलाई स्वस्थ राख्छ। तर सबैको मनमा एउटा प्रश्न आउँछ कि गाईको घ्यू राम्रो कि भैँसीको? आउनुस् यसबारे केही चर्चा गरौं।
गाईको घ्यू खानुका फाइदा
गाईको घ्यू तौल घटाउनको लागि राम्रो मानिन्छ। यसले वयस्क र बालबालिकाको मोटोपना कम गर्न मद्दत गर्छ र खाना पचाउन मद्दत पनि गर्छ। गाईको दूधमा ए-२ प्रोटीन हुन्छ जुन भैँसीको दूधमा हुँदैन। ए-२ प्रोटिन गाईको घ्यूमा मात्र पाइन्छ। गाईको घ्यूमा अनगिन्ती मात्रामा प्रोटिन, मिनरल्स, क्याल्सियम, भिटामिन पाइन्छ। गाईको घ्यूले मुटुलाई राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्छ। घातक रक्त कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाउँछ र रगतमा पर्याप्त मात्रामा कोलेस्ट्रोलको स्तर सुधार गर्छ। गाईको घ्यूको रंग पहेँलो हुन्छ।
भैँसीको घ्यू खानुका फाइदा
यसमा बोसोको मात्रा बढी हुने भएकाले यसलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यसले हड्डीलाई बलियो बनाइराख्छ, तौल बढाउन र मुटुको मांसपेशीको गतिविधि बढाउन भैँसीको घ्यूले मद्दत गर्छ। भैँसीको घ्यूले म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र फस्फोरस जस्ता आवश्यक तत्वहरू प्रदान गर्दछ।
स्वास्थ्यका लागि कुन बढी लाभदायक?
दुबै प्रकारका घ्यू शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छन्। तर, भैँसीको घ्यूभन्दा गाईको घ्यूउलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। गाईको घ्यूमा क्यारोटिन भिटामिन ए पाइने हुनाले आँखा र मस्तिष्कको कार्यका लागि राम्रो मानिन्छ। यो पाचनका लागि पनि राम्रो मानिन्छ र एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफंगल र एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू पनि यसमा पाइन्छ। भैँसीको घ्यूमा गाईको भन्दा बढी बोसो र क्यालोरी हुन्छ। यसले चिसो, खोकी र कफको समस्याको उपचार गर्न र जोर्नीहरू बलियो बनाइराख्न र बुढेसकालमा आउनसक्ने समस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ।